Raw Arnica Montana powder vanobhadhara HPLC≥98% | AASraw
MUTSVENE unobatanidza nekugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika pakukura kweArnica Montana powder, pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Arnica Montana powder inotyisa kana inonwa nesimba rakazara, asi inogona kushandiswa sechizoro, gel kana kamuti pahuni risina kubviswa kana kuti inotorwa mukati kana ichinamirwa kumbaopathically. Arnica yakakura kuva imwe yemishonga inonyanyozivikanwa yemapuroopathiki munyika yose ....
Arnica Montana powder kushandiswa
Mamwe mazita akajairika Arnica Montanaare Mountain daisy, Leopard's bane uye Mountain fodya.
Raw Arnica Montana powder muyero
Ikoko hakuna mhando yeArnica Montana powder dheji kana imwe nhamba inonyanya kukurudzirwa; kune maitiro akawanda akasiyana siyana anoshandiswa zvakasiyana. Diti yakakodzera inofanira kutanga inokurukurwa neunyanzvi hwako hwehutano, uye iwe unofanira kuverenga nguva dzose chigadzirwa chemuchengetedza usati watora chero chinhu.
Arnica Montanais inopisa kana inotorwa nemuromo kana ikasvibiswa mumitambo ye homeopathic yakadai se30X kana 200D simba.
Kushanda kwemapurisa ndeye chirongwa chemishonga chinowanikwa pane izvo zvinonzi "kufanana-kurapwa-kufanana" nheyo, iyo iyo inokonzera zviratidzo kune munhu ane hutano inoshandiswa (mukuderera zvakanyanya) kuratidzira zviratidzo zvakafanana munhu anorwara. Nokudaro, muhutachiona, mishonga inogadzirisa zvakanyanya kana ichinyanyiswa zvakare: a 200C inopfuura yakawanda kupfuura 6C dhi.
Arnica Montanacan zvakare inoshandiswa kubvisa kusagadzikana kubva kubhururuka kana kure nemotokari. Uye ani naani anorwadza zviri nyore achaonga Arnica Montana kukwanisa kuderedza kuputika kwemavara.
Kuti abatsire kupora kubva mukukuvadzwa zviduku, kuwedzererwa kwepamusoro kana kuvhiyiwa, Arnica Montanais inofanirwa kumarudzi ose emishonga cabinet. Pasinei nokuti iwe uri mwana anoshushikana, mwana wemushure wevhiki, kana mutambi wenyanzvi, ndiyo mhinduro yakakwana kune zvese zvinokuvadza zvishoma.